ရေကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး - ဝီကီပီးဒီးယား
ရေကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး (အင်္ဂလိပ်: Varicella/chickenpox vaccine)သည် ရေကျောက်ရောဂါကို ကာကွယ်ပေးသည့် ကာကွယ်ဆေးတစ်မျိုးဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို တစ်ကြိမ်ထိုးခြင်းဖြင့် (၉၅)ရာခိုင်နှုန်းခန့်ကို ရေကျောက်ရောဂါအလယ်အလတ်အဆင့်မဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်နိုင်ပြီး (၁၀ဝ)ရာခိုင်နှုန်းကို ပြင်းထန်သောရောဂါမဖြစ်ပွားအောင် ကာကွယ်ပေးနိုင်သည်။ သို့သော်လည်း နှစ်ကြိမ်ထိုးပေးပါက ပို၍အကျိုးသက်ရောက်မှုရှိသည်။ ခုခံအားအပြည့်အဝမရသေးသူများသည် ရေကျောက်ရောဂါရှိသူနှင့် ထိတွေ့မှုရှိပြီး (၅)ရက်အတွင်း ဤကာကွယ်ဆေးထိုးလျှင် ရေကျောက်ရောဂါမကူးစက်အောင် ကာကွယ်နိုင်သည်။ လူထုတစ်ရပ်အတွင်းရှိ လူအများစုကို ဤကာကွယ်ဆေးထိုးပေးခြင်းဖြင့် ကာကွယ်ဆေးမထိုးထားသော လူများကိုပါ ကာကွယ်မှုပေးနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အရေပြားအောက်သို့ ထိုးနှံရသည်။
ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့၏ အကြံပြုချက်မှာ နိုင်ငံတစ်နိုင်ငံအတွင်းရှိ (၈၀)ရာခိုင်နှုန်းအထက်လူများကို ရေကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးပေးနိုင်မှသာ ပုံမှန်ထိုးသင့်သောကာကွယ်ဆေးများစာရင်းထဲသို့ထည့်သင့်သည်။ အကယ်၍ (၂၀-၈၀)ရာခိုင်နှုန်းခန့်လူများကိုသာ ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးပါက လူများအသက်ကြီးလာသည့်အခါ ရောဂါကူးစက်ခံရနိုင်ပြီး ပို၍ဆိုးရွားသော ရလဒ်များ ဖြစ်ပွားလာမည်ဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို တစ်ကြိမ် သို့မဟုတ် နှစ်ကြိမ်ပေးနိုင်သည်။ အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် ဤကာကွယ်ဆေးကို နှစ်ကြိမ်ပေးရန် အကြံပြုထားပြီး ကလေးများအသက်(၁၂-၁၅)လအတွင်းတွင် ပထမအကြိမ်ပေးသည်။ (၂၀၁၂)ခုနှစ်တွင် ဥရောပနိုင်ငံအများစုတွင် ကလေးအားလုံး သို့မဟုတ် ရောဂါကူးစက်နိုင်ခြေရှိသော ကလေးများကိုသာ ပေးသော်လည်း ဤကာကွယ်ဆေး၏ ကုန်ကျမှုများသောကြောင့် နိုင်ငံတိုင်းတွင် မပေးနိုင်ပါ။
ရေကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးသည် အလွန်စိတ်ချရသောဆေးဖြစ်ပြီး ဆေးထိုးသည့်နေရာတွင် အနည်းငယ်နာကျဉ်ခြင်း၊ ကိုယ်ပူခြင်း၊ ယားယံ၍အင်ပြင်ထွက်ခြင်းစသော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများသာ ဖြစ်တတ်သည်။ ပြင်းထန်သော ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးများ ဖြစ်လေ့မရှိဘဲ ကိုယ်ခံအားကျဆင်းနေသူများတွင်သာ ဖြစ်လေ့ရှိသည်။ အိတ်ခ်ျအိုင်ဗွီ ရောဂါပိုး (HIV)/ ခုခံအားကျဆင်းမှု ကူးစက်ရောဂါ (AIDS) ကူးစက်ခံနေရသူများတွင် ပေးမည်ဆိုပါက အထူးသတိထား၍ ပေးသင့်သည်။. ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများတွင် မပေးသင့်သော်လည်း ယခင်က ကိုယ်ဝန်ဆောင်နေသူများကို အကြိမ်အနည်းငယ်ပေးခဲ့ရာတွင် ပြဿနာဖြစ်ပေါ်ခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ ဤကာကွယ်ဆေးကို သီးသန့်ဆေး သို့မဟုတ် အမ်အမ်အာ(MMR)ဆေးအနေဖြင့်လည်း ရရှိနိုင်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အသက်ရှိသေးသော်လည်း အားပျော့သည့် ဗိုင်းရပ်စ်ရောဂါပိုးဖြင့် ပြုလုပ်ထားခြင်းဖြစ်သည်။
(၁၉၈၄)ခုနှစ်တွင် ရေကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေးကို ပထမဆုံးဈေးကွက်တွင် ရရှိနိုင်ခဲ့သည်။ ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့မှ သတ်မှတ်ထားသည့် အခြေခံကျန်းမာရေးစနစ်အတွက် အဓိကလိုအပ်သောဆေးများထဲတွင် တစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်သည်။ ဤကာကွယ်ဆေးကို အမေရိကန်နိုင်ငံတွင် (၁၀ဝ-၂၀ဝ) ဒေါ်လာခန့်ပေးရသည်။
↑ ၁.၀ ၁.၁ ၁.၂ ၁.၃ ၁.၄ "Chickenpox (Varicella) Vaccine Safety".
↑ ၂.၀ ၂.၁ ၂.၂ ၂.၃ ၂.၄ ၂.၅ "Varicella and herpes zoster vaccines: WHO position paper, June 2014."
↑ Carrillo-Santisteve, P; Lopalco, PL (May 2014).
↑ Flatt, A; Breuer, J (September 2012).
"https://my.wikipedia.org/w/index.php?title=ရေကျောက်ရောဂါကာကွယ်ဆေး&oldid=416146" မှ ရယူရန်